Monday December 09, 2019 - 12:29:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sheekh Xasaan Xuseen Aadam oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu cilmiga badan ayaa markii ugu horraysay ka hadlay gefafkii uu diinta islaamka u geystay Siyaasiga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur.
Kalimad kooban oo uu Sheekh Xasaan Jeediyay ayuu uga hadlay Kufriyaatka uu ku dhacay C/Raxmaan Cabdi Shakuur oo culimada Wilaayaatka islaamiga ah ay u bixiyeen Cabdi Kaffuur ama Cabdi Diinaar.
Sheekh Xasaan ayaa kalimaddiisa si faah faahsan ugu bayaaniyay illaa 6 qodob oo uu ku gaaloobay Cabdi Kaffuurka beeniyay Axaadiith-ta Nabiga SCW islamarkaana diiday Aayadaha Qur'aanka ee ka hadlaya dhaxalka ragga iyo dumarka.
Wuxuu ugu baaqay dhalinyarada muslimiinta Soomaalida in ay khatar geliyaan nafta Cabdi Kaffuur "Dhalinyarada waxaa waajib ku ah ninkaas isaga ah sida uu muqadasaadkiina khatar ugeliyay in aad naftiisa khatar ugelisaan, arrintaas mas'uuliyadeeda Alle hortiisa aniga ayaa qaadaya" ayuu yiri Sheekh Xassaan.
Sidoo kale Sheekha ayaa soo hadal qaaday qaar kamid ah wadaadada oo si hagardaamo leh uga hadlay qadiyadda C/raxmaan Cabdi Shakuur marka laga reero Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Sheekh Daahir Aw Cabdi oo caddeeyay gaalnimada ninkaan.
Halkan ka degso kalimadda oo Video ah ama hoos ka Daawo.